वाणिज्य बैङ्कहरूको इक्विटीमा प्रतिफल घट्यो | गृहपृष्ठ
Home लगानी वाणिज्य बैङ्कहरूको इक्विटीमा प्रतिफल घट्यो
लगानी3views
वाणिज्य बैङ्कहरूको इक्विटीमा प्रतिफल घट्यो
काठमाडौं । वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका २२ वाणिज्य बैङ्कहरूको चालू आव (२०७४/७५)को पहिलो त्रैमासमा इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई) औसत १० दशमलव ६७ प्रतिशत छ । यो गत आवको तुलनामा ४ दशमलव ६६ प्रतिशत बिन्दु कम हो । पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका १० बैङ्कहरूको आरओई औसतभन्दा बढी छ भने ११ बैङ्कहरूको औसतभन्दा कम छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले भने आरओई प्रकाशित गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार बैङ्कहरूले चुक्ता पूँजी बढाएका छन् । सो अवधिमा यी २२ बैङ्कहरूको चुक्ता पूँजी समग्रमा ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत र जगेडा कोष २२ प्रतिशत बढेको हो । चुक्ता पूँजीको अनुपातमा बैङ्कहरूको खुद नाफा बढ्न नसक्दा इक्विटीमा प्रतिफल घटेको हो । सो अवधिमा यी कम्पनीहरूको खुद मुनाफा ८ दशमलव ९३ प्रतिशत बढेको छ । समग्रमा यी बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी ४ दशमलव ६५ प्रतिशत बढेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ४ प्रतिशत घटेको छ । निक्षेपमा बढ्दो ब्याजदरले खुद ब्याज आम्दानीको वृद्धिदरमा कमी आएको हो ।
नबिल बैङ्कको आरओई सबैभन्दा बढी अर्थात् २३ दशमलव ४५ छ भने सबैभन्दा न्यून जनता बैङ्कको २ दशलमव ८३ छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ७९ करोड ८३ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको नबिल बैङ्कले चालू आवको सोही अवधिमा रू. ८५ करोड १४ लाख नाफा कमाएको छ । यो गत आवको तुलनामा ६ दशमलव ६४ प्रतिशत बढी हो । यस बैङ्कले चुक्ता पूँजी बढाएर रू. ८ अर्ब पु¥याएको छ भने जगेडा कोष ११ दशमलव २३ प्रतिशत बढेर रू. ६ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । चुक्ता पूँजीको तुलनामा खुद नाफा बढाउन नसक्दा यस बैङ्कको आरओई गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा घटेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस बैङ्कको आरओई २७ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत थियो । सो अवधिमा बैङ्कको सञ्चालन मूनाफा ६ दशमलव ३२ प्रतिशत र खुद ब्याज आम्दानी ७ दशमलव ११ प्रतिशत बढेको छ ।
जगेडा कोष करीब ३ गुणा बढाएको जनता बैङ्कको चुक्ता पूँजी असोज मसान्तसम्ममा करीब रू. ७ अर्ब पुगेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ६८ करोड २६ लाख रहेको यस बैङ्कको जगेडा कोष चालू आवको सोही अवधिमा बढेर रू. १ अर्ब ८९ लाख पुगेको छ । बैङ्कको खुद नाफा भने १ दशमलव ३१ प्रतिशत बढेर रू. ६ करोड ४८ लाख पुगेको हो । चुक्ता पूँजी २ गुणा बढ्दा खुद नाफा सामान्य मात्र बढेका कारण बैङ्कको आरओई घटेको हो ।